M/weynihii hore ee Koonfur Afrika Thabu Mbeki iyo wefdi la socda ayaa soo gaaray Mogadishu… – Hagaag.com
M/weynihii hore ee Koonfur Afrika Thabu Mbeki iyo wefdi la socda ayaa soo gaaray Mogadishu…
Guddi sare oo ka socda Ururka Midowga Afrika oo uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore ee Koofur Afrika Thabu Mbeki ayaa saaka soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasiamdda Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa Wafdigan ku soo dhoweeyay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Sida wararku sheegayaan Guddigan heerka sare ee uu hoggaaminayo Mr Thabu Mbeki ayaa waxaa ay kulamo la yeelan doonaan Madaxda dowladda Soomaaliya.
Wafdigan ayaa shalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ay wada hadalo la yeesheen Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Wasiirka Arrimaha dibadda Kenya.
Qoraal ay barteeda Twitter-ka ku shaacisay Wasiirka Arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayay ku sheegtay in Thabu Mbeki iyo Madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen arrimaha nabadda, xasilloonida, is dhex galka iyo iskaashiga Gobolka Geeska Afrika, arrimaha Badda Cas iyo Gacanka Cadan.
Wararka qaar ayaa sheegaya Guddigan ka socda Midowga Afrika ee uu hoggaaminayo Thabu Mbeki arrimaha safarkooda la xiriira uu uu ka mid yahay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan arrinta muranka Badda, iyadoo la sheegayo in Midowga Afrika uu doonayo in arrintaas ka galo dhex dhexaadin ama door Nabadoonnimo, ka hor go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ.